30 August 2015 8:51
XASAN XOOGSADE OO BILAABAY DAGAAL JUBOOYINKA KA DHAN AH 1/12/2012
Warar hoose oo ay SWN heshay ayaa sheegaya in madaxwaynaha federaalka Soomaaliya Xasan Xoogsade oo ku howlan yahay sidii uu Kismaayo gacanta ugu dhigi lahaa. Madaxwayne Xoogsade ayaa isticmaalaya qaabab fara badan oo kala duwan oo marba mid la tijaabinayo bal in ay shaqayso iyo in kale.
Dagaalkan iyo diidmada maamul ka hanaqaada Jubooyinka iyo Gedo ma aha mid ku kooban madaxwaynaha hadda talada haya balse waa dhaxal Sheekh Shariif ka dardaarmay soona bilowday xilli hore.
Waxaa la iswaydiinayaa su�aasha ah dowladdu shaqo aan Jubooyinka ahayn malaha miyaa? Idaacad kasta, qof kasta, tv-kasta maxaa ku mashquuliyay Kismaayo? Maxaa ka maqan Indhacade, Goobaale iyo kuwa lamidka ah. Waxaan maqli jiray waraabe la tagidda bartay, ka rididda ceeb buu moodaa.
Xasan Xoogsade Itoobiya wuxuu u tagay arinta Kismaayo, wuxuu u ogolaaday inay dalka Soomaaliya ciidamadeedu tagi karaan meel kasta iyo goor kasta oo ay ugu horayso Kismaayo. Waxaa la oron karaa Kismaayo daraadeed Itoobiya ayuu uga wali yeelay Soomaaliya, laakiin su�aashu waxay tahay Itoobiya Xasan Xoogsade ma uga baahan tahay ogolaansho ciidda Soomaaliya? Jawaabtu waa maya.
Wuxuu iclaamiyay dagaalka dhan ah Kenya, waxay wararka qaar sheegayaan inuu jiro xiriir qarsoodi ah oo Xasan Xoogsade la wadaago xubno ka tirsan Al-Shabaab sidii ay Jubooyinka culays usii saari lahaayeen, taasina waxaa u daliil ah madaxwaynaha oo aan ka hadlin sheegashada Shabaabka ay ku sheeganayaan in Kenya qaadatay Jubooyinka oo xitaa aan dowladda Soomaaliya lagala tashanayn. Arintani waxay dhacday marar dhowr ah: madaxwayne Xoogsade marna kama hadlin, taasoo lagu fasiri karo wax uu rabay oo loo yiri.
Muqdisho waxaa yaalla isbaarooyin lagu qiyaaso ilaa 300, oo dhamaantood dadka lacago lagaga qaado, waxaa ugu yaab badan in midi ku toosan tahay iridda wayn ee Villa Soomaaliya. Mooryaanta ayaa la sheegay in marka ay ay arkaan teknikada Ugandis-ka ee waardiyaynaya Xoogsade ay ka gabadaan, marka ay gudbaanna dhigtaan isbaaradooda madaxwaynuhuna uu ka warhayo. Waa yaabka yaabkiiye isbaaralaydu waxay ka tirsan yihiin askarta dowlada.
Wariyaha noo jooga Muqdishu wuxuu noo xaqiijiyay inuu jiro guri kamid ah guryaha shacabka ee xoogga lagu haysto, gurigaasoo daraadiis loo dilay dad gaaraya 13 qof. Dadka ayaa siyaabo kala duwan loo dilay, qaar guriga ayay tageen oo lagu dilay, qaarna mooryaanta ayaa ka war heshay imaatinkooda kuna dishay xaafado ka mid ah Xamar.
Xoogsade Muqdisho ayaa uga awaliyaysan Kismaayo, bal horta ayada meel ha saaro amnigeeda. Kismaayo dadkii lahaa ayaa haysta una tashan waxayna raacayaan nidaamka federaalka Soomaali ku heshiisay Jaalle madaxwayne ha ku soo xadgudbin ` stay where you are�.
Xasan Xoogsade ha ogsoonaado inuusan ahayn madaxwayne shacabku soo doortay balse uu yahay madaxwayne ku yimid afar qabiilo iyo barkii dulmiga ahaa ee uu ismaaciil Cumar Geelle u soo yagleelay ilma adeeradiis si loo ihaaneeyo qaybo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo ay kuwa jubooyinku ugu horeeyaan.
War Culus: Xusseen Cabdi Xalane Oo Loo Magacaabayo Xilka Ra iisalwasaaraha Soomaliya Iyo Ku Dhawaaqida Oo...Xuseen Cabdi Xalane Oo La Saadaalinayo Inuu Noqon Doono Raysal Wasaraha Soomaaliya 11/12/2013...War Deg Deg Ah: Xuseen Cabdi Xalane Oo Loo Badinayo Inuu Noqon Doono Raysal Wasaaraha Cusub Ee Soomaaliya Hadana Villa somaliya Ku Sugan 08/12/2013..Diyaarad Itoobiya Leedahay Oo Hub Sidday oo Muqdisho ku Burburtay (VOA)Daawo Madaxweyne Xasan Sh: Arimaha Jubooyinka Waxay Somalidu Maqli Doontaa Wax Ay Dhagahooda Ku FarxaanA new and much-lauded president is finding it hard to bury old divisionsXaalka Sh xasan Daahir Aweys Oo Xamar Laga Dajiyey...Dood: Maxaa laga Yeelayaa Sh. Xasan Daahir Aweys Oo Is Dhiibay...XASAN XOOGSADE OO BILAABAY DAGAAL JUBOOYINKA KA DHAN AH 1/12/2012Madaxweyne Shariif oo dalacsiiyay 141-Sarkaal oo ka tirsan Ciidamada Booliska SoomaaliyedTurkish PM�s Visit to Boost Morale in Somalia by Dr. Mohamed AbbasA Somali legislator has accused Djibouti President of Ismael Omar Ghelleh of opposing the decision of the former's parliament to extend term by three yearsAfhayeenka Baarlamaanka oo sheegay in weli beesha caalamku aysan ogolaan mudddo kororsigooda Member Login